War Of Words Over Words… | in pursuit of wisdom
निसब्द ज्योति पोखिन्छन,
विश्वासका ओसिला डेराहरुमा ।
हिजो, आज र भोलिमा ।
एक चिम्टी अन्धकारमा हराउने,
जिउँदो अस्तित्व कदापी सत्य होईन ।
अग्रगामी समय ।
लामो यात्राा निरन्तर छ, हुनेछ ।
अवस्य सुक्छ्न ।
बिगतका दुई कप कफी,
हामी दुवैले बिसर्जन गरिसक्यौँ …!
प्रेम निराकार झुट हो ।
राता फुल सबै गुलाफ हैनन ।
गुलाफ सबै राता हुन्नन ।
संकटमा परेका आजहरु,
भोलिका दोष हैनन ।
उमारेका बिचरा आशचाँही
शुन्य जीवनखेती सँगै ।
बिस्तारै, बिस्तारै ।।
This entry was posted in Kawita-Yatra and tagged निष्कर्ष,प्रकाश,प्रकाशेका कविता,प्रेम on मे 9, 2016 by Prakash.
सबैचिज तितो भो, तिम्रो भिषा लागेपछी ।
समय नै छिटो भो, तिम्रो भिषा लागेपछी ।
बिस्तारै बिस्तारै, हो हराए साथिभाई ।
शहर यो रित्तो भो, तिम्रो भिषा लागेपछी ।
पुराना वाचा तिम्रा, एक एक सम्झदैँछु ।
बिगत नै मीठो भो, तिम्रो भिषा लागेपछी ।
टुटेपछि सपना, आँखाहरु थाक्दारैछन् ।
रातै अनिदो भो, तिम्रो भिषा लागेपछी ।
मधेसमा हड्ताल, अस्थिर छ राजनीति ।
राष्ट्रै अनौठो भो, तिम्रो भिषा लागेपछी ।
अभाव नहोस् है, तिम्रा उन्नति खातिर ।
लौ मन मुटु धितो भो, तिम्रो भिषा लागेपछी ।
अनायसै जिन्दगीमा, काँचसरी ईच्छाहरु ।
धुलो पिठो भो, तिम्रो भिषा लागेपछी ।
This entry was posted in Gazals and tagged प्रकाश,प्रकाशेका कविता,प्रेम,बियोग,भिषा लागेपछी,याद,समय,Gazals on सेप्टेम्बर 25, 2015 by Prakash.
रहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
हो, डरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
रित्तो समाजमा जन्मिए, सस्तैमा बिक्छु ।
शहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
असन्तुलित सपनामा, मौन छटपटी ।
प्रहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
बेदनात्मक जिन्दगीका, अमिला घाउ ।
जहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
कम्पनपछी भत्किए, आशा भरोसा ।
हो, घरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
सुसाएको सुनसान नदी, भ्रान्ती हैन ।
लहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
This entry was posted in Gazals and tagged गजल,प्रकाश,प्रकासेका गजल,भ्रान्ती on अगस्ट 30, 2015 by Prakash.
म बेसुरले हिँड्छु ।
हामी बेसुरले हिँड्छौ…!
पाइला मेटिन्छ या मेट्छौ ।
लक्ष्य बोकिन्छ या बोक्छौँ…।
अँध्यारा भिरहरुमा ।
उज्याला पिरहरुमा ।
खुल्न पनि सकिन्छ.
यदाकदा झिसमिसमा ।
कुनै दुर्लभ पुर्णिमामा ।
अविष्मरणिय एक साँझ,
निशब्द प्रकृति ।
निस्सार अवस्थिति ।
शाश्वत आकृति तिम्रो,
हेराहेर, कदापी सत्य होइनन् ।
चलायमान मस्तिष्कका तारहरुले,
जब आँखाका पछील्तिर,
बन्द परिपथ बनाउंछन्,
अनि हामी देख्छौं,
र देखेझैं गर्छौ ।
जस्तो एक प्रकारको भाषा,
जुन हामी बुझ्छौं,
र बुझेझैं गर्छौ ।
निष्कर्ष: पुर्णिमाका जम्काभेटहरु अमर हुन्छन् ।
कालो भुईँमा नीला रङहरु अष्पष्ट हुन्छन् ।
पुर्णिमाहरु भ्रम हुन ।
भ्रमहरु पुर्णिमा हुन ।
This entry was posted in Kawita-Yatra and tagged कविता,कालो भुईँमा नीला रङहरु,पाइला,पुर्णिमा,प्रकाशेका कविता,लक्ष्य,समय on अगस्ट 29, 2015 by Prakash.
तिमी != म ।
म != तिमी ।
फरक सोचमा प्रेम ।
प्रेममा फरक सोच ।
दुई मनमा एउटै संगीत ।
एउटै संगीतमा दुई मन ।
मेरो जिन्दगी = तिम्रो रहर ।
तिम्रो जिन्दगी = मेरो रहर ।
तिमी = म ।
म = तिमी ।
प्रेममा क्रान्ति ।
क्रान्तिमा प्रेम ।
विचारमा पहिरो ।
पहिरोमा विचार ।
This entry was posted in Kawita-Yatra and tagged कविता,तितो सत्य,प्रकाशेका कविता,प्रेम,समय on जुलाई 25, 2015 by Prakash.
हिजोआज, लाटो ऐना अगाडि
म आँफैलाई ‘म’ मन पर्दैन ।
तँलाई कसरी मन परोस ।
तँ त जुलुम सुन्दरी
जुनको टकले धपक्क बलेकी परी अरे ।
सुन्दैछु, चोक गल्लिमा तेरै चर्चा छ ।
आँखा तेरो, म्रिगका जस्ता रे ।
केश तेरो, स्वच्छन्द छहरा रे ।
अण्डाकार अनुहार तेरो, पुर्णेको चन्द्रमा रे ।
लामो घाँटी तेरो, ढुकुरको जस्तो रे ।
बुझ्दिन म त,
फिगर तेरो, छत्तिस-चौबिस-छत्तिस रे ।
अनी उचाई, गहिराई
कतै खोट लाउनै नसकिने, टम्मै मिलेका रे ।
यसरी देख्दैछु यहाँ
तेरो रुपको पाईलैपिच्छे
दुनियाँले काढेका रालहरु ।
दुनियाँले निलेका थुकहरु ।
परीवेश अग्राहय लाग्छ ।
तेरो मौलिकताको चर्चा ।
मेरो समझमा कहिल्यै आएन,
तेरो मगजको बयान ।
तिनताका, कोट्याएर घाऊ
तँ सामु आफ्नो व्यथा पोखेथेँ ।
तैँले त उल्टै हरामी कथाकार भनिस रे ।
मायाले तेरो हात छोएथेँ,
सिधै तैँले बलात्कार भनिस रे ।
आफु सदा झुकेरै भए’नी
तँलाई सहीपथ डोर्‍याउन खोज्दा,
स्वार्थी पुरुषको अहंकार भनिस रे ।
अब त मजाले बुझ्न सक्छु,
आखिर दुरुस्तै रहिछन यहाँ
तेरो थोपडा र मेरो मन ।
मेरो थोपडा र तेरो मन ।
मेरो अमुल्य समयलाई
तैंले त्यसबखत पिरो बनाइस ।
म तेरो अभावमा रोगी थिएं,
मौका छोपेर, औँशिको किरो बनाईस ।
अनी असन्तुलित मेरो मनको समिकरणमा
जाली सुत्र छिराएर, स्टेप बाई स्टेप अगाडि आईस ।
र मलाई फगत नांग्लो जत्रो जिरो बनाईस ।
तर सुन, नखरमौली…
त्यतिखेर तँ सँग फोक्कडमा ठोक्किक्दा
मेरो मुटुमा उठेको टुटिल्को,
मेरो गिदिमा उम्रेको डन्डिफोर
समयसँगै सन्चो भईसके ।
म बिल्कुल ठीक छु ।
तँ नभएर के भो त !
म त्यसै यहाँ रम्न सक्छु ।
म त्यसै यहाँ घुम्न सक्छु ।
मेरो आफ्नै सर्कल छ ।
सुर्य तेरो पनि, मेरो पनि ।
चन्द्रमा तेरो पनि, मेरो पनि ।
तँलाई पनि भिजाउँछ ।
मलाई पनि भिजाउँछ ।
बसन्तमा कोकिल संगितसंगै
फुलेका पर्पल सिरिसहरु त्यसै झर्छन,
समय आउँछ, त्यसै फुल्छन ।
तँ पनि देख्दिनस, म पनि देख्दिन ।
न तँ बुझ्छेस, न म बुझ्छु ।
आखिर के का लागि
मैले तँलाई रोजेको नाटक गरेँ ।
तर अब गुनासो छैन,
म बाठो भईसकेँ ।
तेरो सारहिन अस्तित्वको,
सारहिन याद अब म कदापी बोक्दिन ।
तँलाई कल्पेर मरेतुल्य कविता कदापी कोर्दिन ।
एक्लै हुँदा, आहा ! रमाइलो छ बर्तमान;
सायद, सुन्दर छ भबिस्य…
तँलाई जपेर त्यसलाई कुरुप बनाउँदिन…
This entry was posted in Kawita-Yatra and tagged जीवन,तँ र म,प्रकासेका कविता,प्रगतिबाद,बर्तमान,भबिस्य,शुन्यबाद on अप्रील 19, 2011 by Prakash.